Holtens Gaard: Izwe, umlando, ukuthula nokuthula - I-Airbnb
Holtens Gaard: Izwe, umlando, ukuthula nokuthula
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Mads
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Mey 12.
Holtens Gaard: Nakhu ukuthula, umlando kanye ne-idyll yasemaphandleni epulazini lomndeni elidala. Asikwazi ukukunikeza ukunethezeka, kodwa indawo ephephile, enhle nephumulele yeholide lakho. Ukubuka kwezwe elinamagquma muhle ukusuka endlini. Engadini kunendawo yokudlala nokuzijabulisa. Ipulazi lizungezwe amasimu alo kanye nethuba lokuhamba okuhle emigwaqweni yasemaphandleni engavamile kanye nezindlela ezingenazo ithrafikhi.
Silindele izivakashi zethu ukuthi zigcine indlu icocekile futhi ihlanzekile ngesikhathi sokuhlala kwazo. Sikhokhisa kuphela imali yokuhlanza, uma izivakashi zethu zingathandi ukwenza ukuhlanza kokugcina kwendlu ngokwazo, ekupheleni kokuhlala kwazo. Vele usazise okuncamelayo ekungeneni.
ubusuku obungu-7 e- Hobro
4.71 out of 5 stars from 8 reviews
4.71 · 8 okushiwo abanye
Imvelo enhle. Ibanga elifushane ukuya e-Rold Forest enkulu, i-Mariagerfjord enhle ne-Rebild Hills, i-Hobro ethokomele ne-Mariager. IVolstrup Golfcenter iqhele ngamakhilomitha ayi-6 kanti iHobro Golf Club iqhele ngamakhilomitha ayi-9.
Siyakwamukela, uma kungenzeka, noma sibeke ukhiye. Sihlala kude neHoltens Gaard.
Hlola ezinye izinketho ezise- Hobro namaphethelo